‘रामकहानी’ बाट आकाशले कतिको सफलता हात पार्न सक्लान् त ? - Everest Dainik - News from Nepal
‘रामकहानी’ बाट आकाशले कतिको सफलता हात पार्न सक्लान् त ?
नेपाली चलचित्र ‘म त तिम्रै हुँ’ बाट पहिलो पटक पाइला राखेका अभिनेता आकाश श्रेष्ठको चलचित्र यात्रा सुरु भएपनि यो यात्रा सोचेजस्तो अघि बढ्न सकेको छैन ।
आफ्नो हातमा थुप्रै चलचित्र आएपनि कुनै सफल हुन नसक्दा गुनासो व्यक्त गरेका छन् यी अभिनेता । डेब्यु चलचित्रपछि उनका २ चलचित्र प्रदर्शनमा आए । चलचित्र ‘तिमीसँग’ मा अहिलेकी चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसँग जोडी बाँधियो । हालैमात्र प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र ‘ब्ल्याक’ मा उनको अपोजिटमा अभिनेत्री आँचल शर्मा थिइन् । तर, दुर्भाग्य ! दुवै नेपाली चलचित्र बक्स अफिसमा डुबे ।
याे पनि पढ्नुस आगामी जेठ १२ गते ‘पर्व’ प्रदर्शन हुने
फ्लप चलचित्रमा ह्याट्रिक मारेका आकाशको अहिलेसम्म अभिनयको समेत वाहवाही भएको छैन । ‘डाइलग डेलिभरी’ मा कमजोर रहेको आलोचना खेपिरहेका उनको अब नयाँ नेपाली ‘रामकहानी’ प्रदर्शनमा आउँदै छ ।
तेस्रो चलचित्र रिलिजको एक महिना पनि नबित्दै उक्त चलचित्र यही भदौ २२ गतेबाट सबै हलहरुमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ । लगातार फ्लप नेपाली चलचित्र छायाँले पछ्याइरहँदा उनलाई ‘रामकहानी’ ले आफ्नो कहानी बदल्ने विश्वास छ ।
याे पनि पढ्नुस ‘चट्ट परी’ गीत सार्वजनिक भएदेखि श्वेता फुरुङ्गै
सुदर्शन थापा निर्देशित चलचित्रमा अभिनेत्री पूर्जा शर्मादेखि चर्चित हास्यकलाकार केदार घिमिरे, जितु नेपाल, विल्सन विक्रम राई, रविन्द्र झा, राजाराम पौडेल लगायत प्रमुख भूमिकामा छन् ।
गीत–संगीत र ट्रेलरका कारण चर्चामा रहेको उक्त फिल्मले घरेलू बजारमा सुखद नतिजा ल्याउने फिल्मी पण्डितहरुको आँकलन छ । फिल्ममा आकाशको जोडी पूजासँग बाँधिएको छ ।
चलचित्र ‘रामकहानी’ को कहानी नै उनको वरिपरि घुमेका कारण यो फिल्मको सफलताले उनलाई ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ । उनले आफ्नो अभिनयमा भने कति सुधार ल्याए ? यसले पनि उनको आगामी भविष्यको निर्धारण गर्ने छ ।
ट्याग्स: akash shrestha, kollywood